Nigeria: Muslimiinta oo diiday xeer ragga iyo dumarka dhaxalka u simaya - BBC Somali
Nigeria: Muslimiinta oo diiday xeer ragga iyo dumarka dhaxalka u simaya
Image caption Suldaanka Sokoto, Maxamed Sacad Abuubakar
Sheekha ugu sarreeya culimada Muslimiinta Nigeria ayaa ganafka ku dhuftay xeer cusub oo dhigaya sinnaanta ragga iyo dumarka, kaas oo la doonayo in lagu simo saamiga dhaxalka ee ragga iyo haweenka.
Suldaanka Sokoto, Maxamed Sacad Abuubakar, ayaa sheegay in aanay muslimiintu yeeli doonin ku xad gudubka sharciga Islaamka ee dhaxalka ragga u badiyey.
Ururka ugu wayn ee Masiixiyiinta Nigeria ayaa isagu soo dhaweeyey xeerkan waxa aanu sheegay in diintoodu ogoshahay in ragga iyo dumarku dhaxalka u sinaadaan.
Nigeria waa dal bulshadiisu diinta ku dheggantahay oo qiyaastiina ay Musliimta iyo Masiixiyiintu laba qaybood oo isleeg yihiin.
Isagoo ka hadlaya xaflad loo qabtay Quraan akhris oo ka dhacday woqooyiga gobolka Zamfara, ayaa suldaanku wuxu yidhi "diintayadu waa hab-nololeedkayaga oo dhan, sidaa awgeed yeeli mayno talaabo kasta oo la doonayo in lagu bedelo wax Alle noo banneeyey".
Waxa aanu intaa ku daray "Islaamku waa diin nabadeed, nabad baanu kula noolayn Masiixiyiinta iyo dadka diimaha kale haysta ee dalkan ku dhaqan. Sida awgeed waxa muhiim ah in la noo ogolaado in aan diintayada si buuxda ugu dhaqanno".